पेटभरी खान कहिले पाइएला ? – Jaljala Online
पेटभरी खान कहिले पाइएला ?
साउन २, काठमाण्डौ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहर्वाका किशोर पण्डितको बास एक हप्तादेखि त्रिपालमुनि छ ।
यो खबर मदन पौड्यालले उज्यालो अनलाइनमा लेखेका छन् । परिवारसहित विस्थापित भएका उहाँलाई कतिबेला पेटभरी खान पाइएला भन्ने चिन्ता छ ।
पालिका, विभिन्न संघसंस्थाबाट हात परेको चाउचाउ, चिउरा, दालमोठ पनि परिवारमा बाँडेर खाँदा भोक मर्दैन । बाढीले घरभित्र राखिएका धेरैजसो सरसामग्री फेरि प्रयोग नहुनेगरी नष्ट भएका छन् ।
सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि राहत वितरण तथा सुरक्षित बसोबासका लागि आवश्यक पहल सुरु गरेको भने पनि बाढी पीडितको दैनिकी भने अझै सहज भैसकेको छैन ।
विस्थापित भएका नागरिकको घरमा अझै चुलो बल्न सकेको छैन । त्रिपालभित्र, स्कुल तथा संघसंस्थामा आश्रय लिएर बसेका प्रभावितले जनप्रतिनिधि तथा सरकारले राहत वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको गुनासो पोखेका छन् ।
वर्षैपिच्छे आउने बाढीले सुकुम्बासी बनेकाहरुको अवस्था त झन् बिजोग छ । त्यसैमध्येका एक हुनुहुन्छ, मोरङ विराटनगर एकका श्रवण राय । उहाँको एउटै प्रश्न छ, ‘ अब कहाँ जाने ? जग्गा छैन, यहीँ बस्नैपर्छ । कसैले हाम्रो व्यथा बुझ्दैनन् । बुझ्नेहरुले पनि कुरै सुन्दैनन् ।’
चारैतिर जलमग्न हुनेगरी पानीको सतह ५/६ फिटसम्म पुग्दा ज्यान जोगाउन हम्मेहम्मे भयो । एक तलाका घर डुबे । अहिले पानीको तह घटेपछि भने जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दैछ । तर डुवान प्रभावितलाई राहत वितरणको काम भने व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ को भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत जिल्लाका ६ हजारभन्दा बढी बिस्थापित भएका छन् । बिस्थापित तथा प्रभावितलाई खान र बस्न समस्या छ । प्रदेश २ का रौतहट, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, सप्तरीका नागरिक पनि प्रभावित छन् ।
सम्बन्धित पालिका राहत वितरणका लागि तथ्याङ्क र क्षतिको विवरण खोज्न जुटेका छन् । सरकारले पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सहित आवश्यक रकम खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । तर विधि र प्रकृयामा अल्झिएका पालिकामा विपद् ब्यवस्थापन कोष नै परिचालन हुन सकेको छैन ।
जहाँ राहत पुगेको छैन त्यहाँ पुर्‍याउने र नपुगेको भए व्यवस्थापन गर्ने काम पालिकाकै भएको र केन्द्रलाई सबै जानकारी नहुने उहाँको भनाइ छ । पालिकामा विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी नै छ ।
सरकारले पनि राहत वितरणमा एकद्धार नीति लिएको छ । जसोतसो ज्यान जोगाएका प्रभावितको हालचाल बुझ्न मन्त्री र नेताहरु जानेक्रम बढ्दो छ । तर उनीहरु रित्तो हात आएर आश्वासन मात्रै दिएर फर्किएको रौतहटको गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ताको गुनासो छ ।
जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, तिन घाइते
जेठ ५, बैतडी । देहीमाण्डौबाट गिरेगाडा जाँदै गरेको ग १ च ४९२१ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य तीन जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान साढे ११ बजे दशरथचन्द नगररपालिका–११, नानीगाडमा जिप दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। दशरथचन्द नगरपालिका–१० बराकोटका स्थानीय देउताल मन्दिरमा पुजाको लागि गएका थिए। मृत्यु […]
दाङको एक घरमा बिस्फोट [फोटोफिचर]
मंसिर २६, दाङ । दाङ देउखुरीमा एक व्यक्तिको घरमा बिस्फोट भएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नं. २ कोठरीका घनश्याम चौधरीको पक्की घरमा बुधबार दिउँसो बिस्फोट भएको छ। दिउँसो साढे २ बजेतिर घरमा कोही नभएको समयमा बिस्फोट भएको थियो। बिस्फोटपछि चौधरीको पक्की घर चिरा परेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता विनोदविक्रम शाहका अनुसार चौधरीले उक्त घर भाडामा […]
मनसुनी वर्षा पुनः सक्रिय: कहाँ के हुन्छ, कहिले हुन्छ मौसम सुधार ?
Posted on July 24, 2019 July 24, 2019 Author Jaljala Online
साउन ८, काठमाडौं । आज (बुधबार) देशभर बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित मध्य र पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ भने पूर्वी क्षेत्रमा भने अहिले (बिहान ७ बजे) पानी पार्न रोकिएको छ। दिउँसो तथा राति पनि देशका धेरै ठाउँमा […]